दैवले पनि गरिबलाईनै हेप्ने रैछ ! क्या’न्स’र भएर दुवै हात काटिएका अनिल रुदै भन्छन् म बाच्न चाहान्छु – Dainik Samchar
दैवले पनि गरिबलाईनै हेप्ने रैछ ! क्या’न्स’र भएर दुवै हात काटिएका अनिल रुदै भन्छन् म बाच्न चाहान्छु
March 20, 2021 230
यि हुन् सुदुर पश्चिमका १९ बर्षिय अनिल चन्द । एक बर्ष अगाडी उनको हातको औंला’मा सानो फुस्रो दाग आएको रहेछ ! दाग हो सन्चो भै हाल्ला नि भनेर यतिकै वास्ता गरेनछन्! तर बिड’म्ब’ना, त्यो त क्या’न्स’र’को सुरुवात र’हेछ ।
दाग बढ्दै गयो, हात टु’क्रा टु’क्रा का’ट्दै ग’र्नु पर्ने भो! अहिले भाईको पुरै हात का’टिस’किए’को छ ! हात’को क्या’न्स’र त हात का’टेर फ्या’के, तर अहिले छातीमा पनि दाग देखिएको’ले भक्तपुर क्या’न’स’र अस्पताल’मा उनको किमो थेरापी चलिरहेको छ।
तर उनीसंग अब पैसा नै छैन किमो’को लागि! आफन्त पनि छैनन् रे उनका एकजना साथीले उनलाइ राखेका छन् सहारा दिएर ! पहिले हात का’ट्दा साथीहरु मिलेर अलिअलि पैसा उठाएर सहयोग गरेछन्, अब त साथीहरु’संग पनि पैसा छैन ! अलिकति पैसा भए उनको उपचार सम्भब छ ।
उनी बाच्न चाहन्छन्, पढ्न चाहन्छन्, केहि गर्न चाहन्छन् । एउटा हात गुमे पनि अर्को हात छ , म बाचेर केहि गर्छु दिदी मलाई बचाईदिनु भन्छन्..! के उनलाइ बचाउन तपाइ हामी सानो प्रयास गर्न सक्छौं यो ग्रुपबाट? हाम्रो सानो प्रयासले कसैको जी’बन ब’च्छ भने त्यो भन्दा ठूलो मानवीय धर्म के हुनसक्छ ?
सहयोग को अपिल : क्या’न्स’र भएर हात समे’त दुई पट’क का’टि स’क्दा कतै’बाट सहयोग नजुटे’पछि बै’तडि का अ्निल चन्द भक्तपुरको क्या’न्स’र अस्पताल बाट सहयोग को अपिल गरेका छन ।
esewa Number : 9844819618
bank : NCC Bank ( melauli Baitadi )
Bank A/c : 1490000081910
Bank H. Name : Anil Chand
Prevआज दिन र रात बराबरी हुने
Nextटंकले फेरी गरे यति ठुलो सहयोग, अशोकको जस्तै रबिन्द्रको पनि भगवान बने (हेर्नुस् भिडियो
रविले भेटाए भागरथीको शव पहिलो पटक देख्ने ब्यक्ति, घटनास्थलमै पुगेर देखाए अवस्था (भिडियो हेर्नुस्)
शुष्मालाई पाँच वर्ष जे’ल हाल्न सक्ने प्रमाण हामीसँग छ’ – स्वेता खड्का
टिकटकबाट अव नेपालमा पनि आम्दानी हुने !यसरी गर्न सकिन्छ